Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Shirkadda. Shiinaha Attenuator Warshad
ST Dheddig Go'an Ilaa Isugeynta Fibre Optic
Qalabaynta indhaha ee go'an waxaa loo isticmaalaa iskuxirayaasha 'fiber optic' si loo yareeyo awoodda indhaha ee heer cayiman. Soosaarayaasha badanaa la isticmaalo ee loo yaqaan 'fiber optic attenuator' waa nooc dumar iyo lab ah, oo sidoo kale loo yaqaan 'attenuator fiber plug'. Waxay la socdaan maraakiibta dhoobada ah waxaana jira noocyo kala duwan oo ku habboon noocyo kala duwan oo isku xirayaasha fiber optic. Qiime go'an Fibre optic attenuator wuxuu yareyn karaa awooda muraayada ee heer go'an, Feejignaanta Fibre optic attenuator-ka ayaa leh xaddiga kala-soocid la hagaajin karo. Astaamaha ♦ Wide ...
SC Isuduwaha Fikradaha Fiican
MU Fibre Fiber Optical Attenuator Lab ilaa Dheddig
Qalabaynta indhaha ee go'an waxaa loo isticmaalaa iskuxirayaasha 'fiber optic' si loo yareeyo awoodda indhaha ee heer cayiman. Soosaarayaasha badanaa la isticmaalo ee loo yaqaan 'fiber optic attenuator' waa nooc dumar iyo lab ah, oo sidoo kale loo yaqaan 'attenuator fiber plug'. Waxay la socdaan maraakiibta dhoobada ah waxaana jira noocyo kala duwan oo ku habboon noocyo kala duwan oo isku xirayaasha fiber optic. Qiime go'an Fibre optic attenuator wuxuu yareyn karaa awooda muraayada ee heer go'an, Feejignaanta Fibre optic attenuator-ka ayaa leh xaddiga kala-soocid la hagaajin karo. Astaamaha Wide ...
LC Qalabka Fibre Optical Attenuator Lab ilaa Dheddig
Khadka Tooska ah ee Isbeddelka Indelaha
Isbadalka khadka tooska ah ee tooska ah (VOA) ayaa gacanta lagu hagaajiyaa, waxaa loo isticmaalaa si sax ah isu dheelitirka awoodaha signalada ee wareegyada fiilooyinka, ama isku dheelitirka ishaalka muuqaalka marka la qiimeynayo qiyaasta firfircoon ee nidaamka cabbiraadda. Astaamaha ♦ Birta birta ah ee fiyuuska doped bility Ilayska tamarta sare ee ilayska independence Madaxbanaanida Mawjadaha levels Heerarka joogitaanka oo ka bilaabma 1dB ilaa 25dB ♦ 1310nm, 1550nm iyo 1310 / 1550nm oo dhererkoodu yahay laba codsi ♦ Erbium Doped Fiber Amplifiers (EDFA) ♦ Dense Wave Division M. ..
Fududeeyaha isbeddelka indhaha, nooca adabtarada, 0 ~ 30 dB furfurnaan, 1310 & 1550nm, labo daaqad, FC / PC. CODSIGA Shabakadaha Isgaarsiinta EDFA CATV Shabakadaha Isgaarsiinta Qalabka Firfircoon Qalabka Joojinta MUUQAALYADA Kala duwanaansho ballaaran Degaan ahaanta deggan Qaabilaadda dhoobada dhoobada Fudud oo la isku halleyn Karo
FC Qeexida Aragtida Indhaha
Qalabaynta indhaha ee go'an waxaa loo isticmaalaa iskuxirayaasha 'fiber optic' si loo yareeyo awoodda indhaha ee heer cayiman. Soosaarayaasha badanaa la isticmaalo ee loo yaqaan 'fiber optic attenuator' waa nooc dumar iyo lab ah, oo sidoo kale loo yaqaan 'attenuator fiber plug'. Waxay la socdaan maraakiibta dhoobada ah waxaana jira noocyo kala duwan oo ku habboon noocyo kala duwan oo isku xirayaasha fiber optic. Qiime go'an Fibre optic attenuator wuxuu yareyn karaa awooda muraayada ee heer go'an, Feejignaanta Fibre optic attenuator-ka ayaa leh xaddiga kala-soocid la hagaajin karo. Astaamaha ...